Aries ne-Capricorn, ukuhambisana yalezi zimpawu ezingenhla - isihloko ngempela olubucayi. Asivume, ukuthi inyunyana lezi zinhlamvu ezimbili kungenzeka. Kanti kwezinye izimo, ngisho nobuhlobo babo ukuthuthukisa kahle. Capricorn Sibekezele uyakwazi ukubona "zezingane" emkhayeni ka Aries, kodwa iyiphi ukubekezela, manje noma ngokuhamba kwesikhathi siphele. Against isizinda Capricorn, Aries ubukeka beya kwenye iphuphu esizama zonke izindlela ongazithatha ukuze uphumelele. Kwenza eziningi amaphutha, akhubeke awe, uye phambili futhi. Capricorn ngokuphambene njalo ephumelelisa lezi zinhloso, futhi, okusekelwe eside. stop Capricorn kumzila wakhe akunakwenzeka. Yena iqhubekela phambili, futhi lokho akusho ngisho kubonisa nhlobo isithakazelo ngokuthi yini isikhathi nomngane wakhe ngemuva kuye. Ngaphezu kwalokho, i-Capricorn uyakwazi ukuya kude nje Aries uyohlela Ukuzivocavoca yabo alunamsebenzi.
Kakade ngesisekelo salokhu singasho ukuthi Aries ne-Capricorn, okuyinto moot iphuzu kwedivayisi, ezihambayo bacondze etindzaweni letehlukene. Wozani tekuhlangana nalezi zibonakaliso ezimbili nazo buphazanyiswe polarity yabo okuhluke kakhulu. Aries, isibonelo, ngokweqile bube buhle, kepha nethemba lokuhle yakhe akukhona njalo sobala Capricorn, okungakwazi ukuqonda yonke sengqondo lula impilo Aries. Aries, nakho konke okunye akanawo ukuhlakanipha nesineke Capricorn.
Aries ikhono ukuba bangakushayi mkhuba okwakushiwo ukuthi kwenzekani endaweni emzungezile ku obishini lokuphelelwa izenzakalo kancane ecasulayo omdala hhayi iminyaka Capricorn. Ubumbano lwezinhlangano zalezi zinhlamvu ezimbili ngezinga elingakanani ungathi ubuhlobo phakathi kukamama nengane encane kakhulu. Endabeni Capricorn lesi simo uyakusutha ke inyunyana zabanye kungakuqinisa ngempela ukusinda u-Adalberto isikhathi eside.
Hhayi esivuna ubudlelwano phakathi Capricorn futhi Aries libuye lithi Aries nozwela ngokweqile, lokho akusho mayelana Capricorn. Ukuze Capricorn iyona ebaluleke kakhulu ingcebo. Ufuna ukufinyelela isikhundla elithile emphakathini futhi ukunikeza wena nomndeni wakho khona ntofontofo. Capricorn ulungele ukubeka cishe wonke amandla akhe.
Aries akaqondi, kungani konke lokhu kubaluleke kangaka, uma ungathola encane. Kulesi sisekelo, phakathi kwamalungu e-uphawu okhela izingxabano sina. Aries iqala ukuba njalo basola Capricorn siwukuthi uyena ichitha isikhathi esiningi emsebenzini wakho, okuyinto aliveza cishe ukuze bit wokugcina amandla. Capricorn ephendula, uzama ukuthola ukulungisiswa ecacile. Kodwa izinkinga wukuthi Aries akuyona ezimiselwe ukuqonda futhi ukuqaphela zonke emaphuzwini Capricorn. Ngakho emva kwesikhashana Capricorn ayeke ukuchitha amandla abo ezingxoxweni engenamsebenzi nge Aries, ngoba siqaphela ukuthi ukuchaza into akunakwenzeka. Ngenxa yalokho, phakathi izinhlamvu kwenzeka kuhlukaniswa, okuholela kamuva kuya sokuvalelisa. Capricorn akaboni iyiphi amathemba kule uhlobo lobuhlobo. Aries, kunalokho, kuze kube muva nje, uzama ukukholisa Capricorn ku okungenangqondo yezenzo zakhe.
ukuhambisana ngesikhathi sokuzalwa komuntu Aries ne-Capricorn babe ukutolika ezahlukene ubuhlobo yalezi zimpawu ezingenhla. Futhi isizathu esiyinhloko salokhu, uma akumangalisi, ubudala. Ngaphezu kwakho konke, esikhathini ngaphambili co-ukuba khona kwalezi izinhlamvu ezimbili cishe kungenakwenzeka. Ivunyelwe inketho yokuthola ulimi olulodwa nomunye kuphela ingxenye yokuphila wesibili. Kodwa ngisho kuleli cala, kwenzeka ngaso sonke isikhathi.
Aries ne-Capricorn, ukuhambisana okuyinto ngempela luyakhohlisa, banemibono ehlukile mayelana nokuphila. Ngaphandle kokuya ngemininingwane enkulu, ake sicabange isithombe esilandelayo. Aries ziklabe obuhle, agcwele izimila edlelweni. Akabange exinwe kuzokwenzekani kusasa, okungukuthi, ukuthi kusekhona utshani esithandayo namanzi, noma kukhona indawo lapho ayengathola ukufihla emvuleni. Ngakho he mema umjoyine uyaziqhenya yasezintabeni. Kunengqondo ukuthi konke kuhamba kahle, kodwa Capricorn ayikwazi yaneliswa ukungaqiniseki esizayo. Ufuna ukuthola njengoba eliphezulu ngangokunokwenzeka futhi ukhululeke. Yilokho phezu kwentaba ephakeme Capricorn uthola lokho okufunayo, okungukuthi, uzothola ukuphepha, ukuhlakanipha uthola injongo yawo yokuphila. Manje, mhlawumbe, kuyacaca kubo bonke, kungakhathaliseki ukuthi Aries ne-Capricorn ehambisanayo.
Lezi izimpawu agcwele izinto eziziphikisayo. Noma kunjalo, akunakwenzeka kungenzeka. Lapho nje Aries ne-Capricorn ngeke besakwazi ukubhekana amakhanda abo, iza ukuqonda phakathi kwazo. Kodwa isikhathi esingakanani liyokuma, futhi kuzoncika isikhathi sobunye yabo! Manje wenze iziphetho zakho siqu: Aries ne-Capricorn - ukuhambisana phakathi kwayo okumele izuzwe noma cha ...
Saskatoon Canadian - berry okumnandi ngaphandle kokuphazanyiswa
Aphambe for Unturned namakhono abo
Isebenza nombhali we "Uthando Okokuqala". Ligama lembhali isebenza "First Love"